Accueil Ny Mpitandrina Toriteny Toriteny 16-07-2017
NY FANOHARANA NY AMIN’NY MPAMAFY (MAT 13 :1-23)
Ireo karazan-tany 4 izay namafazana ny voa dia maneho ny fomba fiainan’ny tsy mpino ny tenin’Andriamanitra, ary tsy ny olona tsy mino ihany fa na dia ny kristiana koa aza amin’ny fotoana sasany eo amin’ny fiainany.
1 – Ny voa tsara (and.3)
Ny tenin’Andriamanitra izay omena ny olona rehetra tsy an-kanavaka dia voa manana ny heriny: velona izy, tsy mety lo ary afaka manova ny fanahy (I Pet 1:23). Tsy misy afa-tsy io karazana voa io izay antsoin’I Jakoba hoe: “…ny teny nambolena izay mahavonjy ny fanahinareo (Jak 1:21). Ilaina ny mandray azy ao am-po mba hidirana ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fahateraham-baovao (Jao 3:5). Kanefa indrisy, fa lavitr’izany ny fandraisan’ny rehetra ny Tenin’Andriamanitra, araka ireto fanoharana nambaran’ny Tompo ireto;
2 – Ny voa voafafy teny amoron-dàlana (and 4,19)
Ny tany efa natao làlana, lasa mafy vokatry ny fanitsahan’ny olona isan’andro, dia tsy inona fa sarin’ny olona mafy fo tsy andairan’ny tenin’Andriamanitra; tsy afaka haniry mihitsy eny toerana ifamezivezen’ny olona ny voa dia ny tenin’Andriamanitra. Dia avy ny vorona ka nihinana ny voa, izany hoe: ilay ratsy dia ny devoly, izay fahavalon’ny olona (Sal 10:1-10) no avy ka manaisotra izay voafafy tao am-pony (and 19).
Afaka manamafy ny fon’ny kristiana amin’ny fotoana vaofetra ihany koa Satana, mba hanesorany ilay voa. Tena mandrovi-tsihy mihitsy Satana: “Ary ireto no ilay teo amoron-dalana, dia izay amafazana ny teny, fa rehefa nandre izy, dia avy niaraka tamin’izay Satan aka manaisotra ny teny nafafy tao aminy” (Mar 4:15). Noho izany dia mila malina isika, fa efa naseho ny tanjon’ilay fahavalontsika. Fa hoy Paoly: “Fa raha miafina ny filazantsaranay, dia miafina amin’izay ho very izany, izay nohajambain’ny andriamanitr’izao tontolo izao, dia ny sain’ny tsy mino, mba tsy hiposahan’ny fahazavan’ny filazantsaran’ny voninahitr’I Kristy, Izay endrik’Andriamanitra (II Kor 4:3-4).
3 – Ny voa vofafy teny amin’ny tany marivo ambony vatolampy ( and 5-6, 20-21)
Ny tany marivo ambony vatolampy dia tsy inona fa ny fanahy tsy mifototra, fanahy marivo salosana. Tsy misy mihitsy ny fahatsiarovan-tena maha-mpanota. Voaray am-pifaliana ny teny fa tsy voakasika mihitsy ny eritreritra; marivo ny asa. Ny fihetseham-po mandalo tamin’ny fandrenesana ny filazantsara dia endrika ivelan’ny finoana ihany. Tsy ampy faka enti-manohitra ny kristiana toy izany ka nony tonga ny fitsapana, dia miala an-daharana izy: “Ireo teny ambony vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin’ny hafaliana; nefa tsy manam-paka ireo fa mino vetivety ihany, koa amin’izay hisehoan’ny fakam-panahy dia mihemotra izy (Lio 8:1-13). Izany no trano naorina tambonin’ny fasika. Ilaina, ry Havana, ny hanana faka lalina mba hahafahana manohitra ny fakam-panahy ary mba hitondra voa (Jer 17:8).
4 – Ireo voafafy teny amin’ny tsilo (and 7, 22)
Eto indray dia nahazo faka ireo voa, nitombo no tahony, kanefa tsy namoa: izany hoe voaray ny tenin’Andriamanitra, nisy vokany teo amin’ny fiainan’ilay olona izany, saingy noho ny fanahiana sy ny fitaky ny harena no nahazo vahana tao am-pony fa tsy ilay teny. Maty tsy nitondra voa akory ny finoana (Jak 2:17), tsy afala mitombo toy ireo voa voagejan’ny tsilo.
Raha mitoky amin’ny harena (I Tim 6:17) ny olona, hoy I Paoly ao amin’I Timoty dia ho voafitany fa “zava-poana mamitaka” ireny hoy Jona 2:9, , “filan’ny fitaka” kosa hoy Paoly ao amin’ny Efes 4:22. Mety koa ho difotry ny fanahiana tafahoatra. Ka na ny mitoky amin’ny harena na ny dofotry ny fanahiana, dia samy tsy misy mitondra voa ho an’Andriamanitra.
Tsara ny manamarika fa mitovy avokoa ny karazana fakam-panahy na fitsapana amin’ireo karazan-tany efatra ireo: vorona, masoandro, vato…. Mihatra amintsika rehetra izany. Ny maha-samy hafa azy dia ny fomba fandraisantsika lalina na tsia ny tenin’Andriamanitra.
5 – Ny voa vofafy teny amin’ny tany tsara (and 8,23)
Ny voa koa dia voafafy teny amin’ny “tany tsara”, izany hoe: tamin’ny fo efa voaomana, izay efa niasan’ny Fanahin’Andriamanitra: tafiditra tsara ny tenin’Andriamanitra ary ny fahasoavany ho amin’ny famonjena ny fanahy. Izay ilay hoe masaka amin’ny fotoany ny salohy ary mitondra voa ho an’Andriamanitra. Fatra maromaro no volaza fa azo: 100%, 60%, 30%. Ny zava-dehibe ny fitondrany voa fa tsy ny fatra loatra, izany hoe: ny fisehon’ny fiainan’Andriamanitra eo amin’ny mpino, izay entina hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ho amin’ny fiainana mandrakizay.
Toy ny voalazan’I Paoly ho an’ny kristiana Filipiana, dia aoka iska ho feno ny vokatry’ny fahamarinana, izay avy amin’ny alalan’I Jesosy Kristy, ho voninahitra sy fiderana an’Andriamanitra” (Filip.1:11).
Fanontaniana tokana no hosaintsainintsika hoe: Aiza amin’ireo karazanà tany namafazana ireo ny fonao: teny amoron-dalana ve, izay lanin’ny vorona (nesorin’ny satana), sa teny ambony vatolampy (mba naniry ihany fa tsy lasa lavitra), sa teny amin’ny tsilo (te-hiroso ihany fa be fanahiana ny amin’izao fiainana izao), sa teny amin’ny tany tsara?.
Toriteny alahady 16 Jolay 2017
La parabole du semeur : Mat 1-23
1. La « bonne semence » (v. 3)
2. La semence tombée le long du chemin (v. 4, 19)
Satan peut aussi profiter d'un endurcissement temporaire du cœur d’un croyant pour ravir la semence, avec les conséquences qui en découlent. Le diable est très actif : « Satan vient aussitôt … » (Marc 4 : 15). Soyons donc vigilants, les desseins de l'adversaire nous sont clairement révélés (2 Cor. 4 : 3-4).
3. La semence tombée sur les endroits rocailleux (v. 5-6, 20-21)
4. La semence tombée dans les épines (v. 7, 22)
5. La semence tombée sur la bonne terre (v. 8, 23)
La seule question qui se pose pour notre méditation d’aujourd’hui est celle-ci : laquelle parmi ces terres où l’on sème les grains correspondent à notre cœur : est-ce le long chemin, est-ce l’endroit rocailleux, est-ce les épines, est-ce la bonne terre ?
Prédication dimanche 16 juillet 2017